Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Fiaran-dalamby mpivahiny any Afrika Atsimo, tonga ao Tanzania ny Rovos Rail
Ny Rovos Rail, ilay lamasinina fizahan-tany mahafinaritra indrindra eto an-tany, dia ao Tanzania taorian'ny nahavitan'ny dia nandritra ny tapa-bolana, safari avy any Afrika Atsimo ka hatrany Afrika Atsinanana.
Ny fiaran-dalamby mpizahatany manintona indrindra eran'izao tontolo izao fantatra amin'ny anarana hoe "The Pride of Africa", nijanona tao amin'ny fiantsonan'ny Tanzania Zambia Railway Authority (TAZARA) ny sabotsy antoandro teo am-pifaliana sy fifamihinana teo amin'ireo mpizahatany 60 tonga tao amin'ny renivohitra ara-barotra Tanzanianina taorian'ny 15 andro dia fitsangatsanganana an-tsokosoko avy any amin'ny tendrony Afrika ka hatrany afovoan'ny kaontinanta.
Ny fiaran-dalamby lafo vidy dia nitondra mpizahatany 60 avy any Afrika atsimo ka hatrany Dar es izay manodidina ny 6,500 XNUMX kilometatra, mandalo amin'ireo toerana manintona mpizahatany any Afrika atsimo, Zimbabwe, Zambia avy eo Tanzania.
Ny lamasinina dia mamakivaky faritra manintona ara-tantara sy fizahan-tany any atsimon'i Afrika, ao anatin'izany ny Riandranon'i Victoria ao Zimbabwe, ny toeram-pitrandrahana diamondra Kimberley any Afrika atsimo, ny Limpopo ary ny Valan-javaboary Kruger ary ny reniranon'i Zambezi.
Ao Tanzania, ny lamasinina dia mamakivaky toerana manintona mpizaha tany any South Highlands, ao anatin'izany ny Kipengere sy Livingstone Ranges, Kitulo National Park, Selous Game Reserve, miaraka amin'ireo toerana mahasarika mpizahatany hafa.
Ny Rovos Rail na ny lamasinina mirehareha "Pride of Africa" ​​dia manaraka ny lalan'i Cecil Rhodes avy any Cape, mamaky an'i Afrika atsimo mankany Dar es Salaam ary mampifandray ireo mpandeha aminy amin'ny faritra hafa any Afrika amin'ny alàlan'ny tambajotram-by any Afrika Atsinanana.
Mampientam-po izany, angamba ny fotoana tokana mandritra ny androm-piainana mitaingina lamasinina toy izany atosiky ny motera etona sy ny gazoala ary miaraka amina mpanazatra hazo efa tranainy hatramin'ny faramparan'ny taona 1890 fa novaina ho hotely kintana dimy misy fotodrafitrasa rehetra.
Ny nofinofin'i Rhodes momba ny lalamby Cape to Cairo, dia nandroso hatrany avaratra hatrany Dar es Salaam ao afovoan'i Afrika, ahafahan'ny mpizahatany mandeha avy any Cape Town mankany Berlin na Paris aorian'ny fiampitana ny ranomasina Mediteraneana